Qorshaha dib loogu furayo Deenmaark oo la isla meel dhigay - Corona Denmark
Qorshaha dib loogu furayo Deenmaark oo la isla meel dhigay
Comments Off on Qorshaha dib loogu furayo Deenmaark oo la isla meel dhigay
Xukuumadu waxay 7.maajo soo bandhigtay qorshahaha soo socda, ee dib loogu furayo meelaha shaqada iyo xarumaha waqtiyada inagu soo fool leh. Dib u furida waxaa shuruud u ah, in naashaadaadka kala duwan loo fuliyo si mas’uuliyad caafimad leh, si loo kontoroolo fidida caabuqa. Waa in la sii joogteeyaa kala fogaanshaha iyo nadaafada faydhawrkaba.
La soo hadal khadka hotlaynka ah, haddii shaki kaaga jiro sida dib u furida ay saamayn ugu yeelan karto adiga iyo qoyskaadaba.
Si buuxda ayaa loo furayaa tafaariiqlayaasha – dukaamada iyo suuqyada waawayn(11. maajo)
Fasalada 6 – 10 waxay bilaabanayaan (18.maajo), iskuulada iyo kamuunaha ayaga ka balamaya, habka ugu fiican ee dib u furinta loo wafaajin kara si caafimaadka ku salaysan
Waxbarida iyo imtixaanada u baahan in la kulmo(18.maajo)
Baaraka – kafeeyada iyo wixii la mid ah waxaa la furayaa(18.maajo)
Kaniisadaha iyo meelaha diimaha waxaa la furayaa(18.maajo)
Shaqada guriga ee shirkadaha gaarka loo leeyahay
Isboortiga xirfidaysan oo aan lahayn daawadayaal
In laga amaahdo ama la keeno buugaga maktabadaha waxay bilaamaysaa (18.maajo)
Ciyaaraha – iyo naadiyada – banaanka
Xiritaanka koorsooyinka kuleejyada (18.maajo)
Waa la furi karaa xerada xayawaanka, haddii martidu baabur ku gelayaan
Xukuumadu waxay wadahadalo kula jirtaa dowladaha dariska ah, waxayna go’aansan doontaa xakameynta xadka ku meel gaarka ah ee mamnuucida soo gelitaanka iyo sidoo kale kordhinta hagida safarka. xukuumadu waxay taas ka hadli doontaa ugu danbayn 1da Juun 2020.